VPN maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Mac (2020) - Mora ampiorina sy ampiasaina - Vpn
VPN maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Mac (2020) - Mora ampiorina sy ampiasaina
Na izany aza, mamantatra hoe iza amin'ireo no VPN maimaim-poana indrindra ho an'ny Mac?Eny, eto izahay hanampy.
VPN dia fitaovana tsara hitazomana ny angon-drakitrao eto amin'ity tontolon'ny Internet ity. Tsy maintsy mieritreritra ianao fa maninona aho no mila VPN hitandrina ahy raha efa manana antivirus napetraka ao amin'ny Mac-ko aho. Ny tena izy, VPN manampy fiarovana fanampiny rehefa mizaha Internet. Ary ny VPN tsy vitan'ny hoe manao izany, fa mamela anao hiditra ao anaty atiny voasakana sy voasivana avy amin'ny faritra rehetra amin'izao tontolo izao ary manampy anao hanakana dokam-barotra sy pop-up tsy ilaina mihitsy aza.
Androany, hanome anao ny safidinay VPN maimaimpoana ho an'ny Mac anao izahay. Andao hiditra ao.
Maninona isika no mampiasa VPN maimaim-poana?
Ny zavatra misy VPN maimaim-poana dia na dia mahazo fidirana maimaim-poana amin'ny serivisy aza ianao dia voafetra ary tsy miankina amin'ny mariky ny drafitra premium. Saingy mino izahay fa ny fananana zavatra dia tsara kokoa noho ny tsy fananana. Noho izany, nataonay antoka fa hahazo VPN maimaim-poana tsara indrindra any ianao ho an'ny Mac.
Mitady Serivisy VPN azo antoka? Taratasim-bola Serivisy VPN 10 tsara indrindra avy amin'ny faritra bilaoginay.
Lisitry ny VPN maimaim-poana indrindra ho an'ny Mac:
1. Express VPN - Tsy misy # 1 VPN azonao
Ity no VPN # 1 azonao atao maimaimpoana amin'ny Mac. Na dia mila mandoa vola aza ianao alohan'ny hidirana amin'ny serivisin'izy ireo dia misy tratra, satria manome izy ireo Politika famerenam-bola 30 andro , azonao atao ny miala amin'ny famandrihanao ao anatin'ny marika 30 andro ary mamerina ny volanao feno. Azo alaina amin'ny Big Sur (11), Catalina (10.15), Mojave (10.14) & High Sierra (10.13), X Yosemite (10.10) & X El Capitan (10.11).
Miaraka amin'ny OS, miasa amin'ny maodely Macbooks sy iMac rehetra any izy. Azonao atao ny manangana azy amin'ny dingana tsotra telo fotsiny ary mankafy ny Internet amin'ny tranokala safarianao amin'ny fiarovana fanampiny.
Rehefa mandoa ny serivisy mialoha ianao, dia mahazo mihidy ireo endrika rehetra tsy misy fetrany.
Mahazo Servers amin'ny toerana 160 manerana an'izao tontolo izao mandrakotra firenena 94 ianao.
Serivera novainaina haingam-pandeha.
Soso-kevitra amin'ny fantsom-panazavana izay ahafahanao misafidy izay atiny hotombanana ary iza no hampifandraisina amin'ny fifandraisana mahazatra.
Network Kill Switch Feature izay manome antoka fa voasakana ny fifamoivoizanao raha maty ny tambajotra proxy.
Ampifandraiso amin'ny fitaovana 5 indray mandeha.
Raha maniry hividy ny serivisy premium ataon'izy ireo ianao aorian'ny andrana maimaim-poana. Ireto ny drafitra natolotr'izy ireo
Ireo drafitra rehetra ireo dia manana antoka fampodiana vola 30 andro.
2. NordVPN - Ny tsara indrindra ho an'ny Mac amin'ny ankapobeny
Ity mpamatsy tambajotra proxy any Panama ity dia iray amin'ireo tsara indrindra azonao atao amin'ny Mac maimaim-poana. Izy ireo koa dia manana ny tetikasan'ny 30 andro famerenam-bola hahafahanao miditra amin'ireo endri-tsoratra premium rehetra ananany tsy misy fetra mandritra ny 30 andro ary miala amin'ny famandrihana alohan'ny marika iray volana.
Ny NordVPN no VPN tsara indrindra amin'ny MacOS, ny interface dia madio sy mora kokoa noho ny ExpressVPN. Manolotra serivera tsy misy dikany mihitsy aza izy ireo, ireo mpizara ireo dia tsy inona fa ireo mpizara hafa izay azo ampiasaina manokana hidirana amin'ny VPN izay mavesatra ny ferana amin'ny fampiasana serivisy toy izany. Azonao atao ihany koa ny miova eo amin'ny protokol toy ny TCP / UDP arakaraka ny safidinao ny hafainganana sy ny fahamendrehana.
Amin'ny alàlan'ny fandoavana mialoha, ny mpampiasa dia afaka mamoha ireo fiasa rehetra azon'ny mpampiasa premium. Andao jerena ny sasany amin'izy ireo.
afaka misafidy amin'ireo mpizara 5400 mahery ianao izay hita any amin'ny firenena 59.
Fomba fanafenana Inhouse NordLynx mitazona ny datao tsy ho voaro.
Mpizara P2P an-jatony maro izay mamela anao hizara rakitra lehibe sy mora foana.
Tsy misy fetran'ny fantsom-pifandraisana, afaka mankafy ny Internet haingam-pandeha ianao nefa tsy misy throttling.
Ampifandraiso amin'ny fitaovana 6 indray mandeha.
Azonao atao ny manamarina ny lisitr'ireo fiasa MacOS NordVPN Eto
NordVPN dia manolotra drafitra telo raha te hividy ny serivisy premium-n'izy ireo ianao.
3. Hotspot Shield VPN - Matoky amin'ny fahamendrehana haingana
Ny kinova fitsapana maimaim-poana an'ny Hotspot Shield, tsy toy ny NordVPN sy ExpressVPN, dia azo andramana maimaim-poana; tsy mila mandoa vola aloha ianao. Saingy ny fihenan'ity dia ny fanananao endri-javatra voafetra. Misy ihany koa ny tratra amin'ity iray ity, manolotra teti-bola miverina miverina 45 andro ihany koa izy ireo, raha te hahazo ny endri-tsarimihetsika rehetra tsy misy fetrany ianao dia afaka mividy ny iray amin'ireo drafitra premium-n'izy ireo ary avy eo misafidy izany alohan'ny 45 andro marika.
Hotspot Shield dia milaza ho serivisy VPN manerantany haingana indrindra. Nijery an'ity fanambarana ity izahay ary izao no hitantsika: Miaraka amin'ny haitao Hotspot Shield's catapult hydra, nahavita nitombo 26,2% ny hafainganam-pandehanan'izy ireo ary ny VPN hafa kosa nilatsaka farafahakeliny 42,5%. Tena haingana izany!
Izahay dia mitanisa ireo fiasa amin'ilay kinova maimaimpoana tanteraka etsy ambany.
Internet haingam-pandeha hatramin'ny 500 Mbs isan'andro.
Afaka mampiasa mpizara USA miorina amin'ny hafainganam-pandeha azo antoka
Manakana ny malware sy tranonkala phishing mihoatra ny 50 tapitrisa isan'andro ny encryption-na miaramila.
Fifanarahana fananana manana patanty antsoina hoe Hydra, izay hamarinin'ny manam-pahaizana mitarika ho haingana sy azo antoka indrindra.
Raha mieritreritra ianao fa mila mandeha amin'ny kinova premium an'ny Hotspot Shield dia ireto ny drafitra azonao isafidianana.
Drafitra Premium:Raha mividy ny fonosana isan-taona an'ity drafitra ity ianao dia mahazo izany amin'ny $ 71.88. Raha iray volana monja ianao no mividy azy dia mahazo $ 12,99.
Drafitra ho an'ny fianakaviana Premium:Raha mividy ny fonosana isan-taona an'ity drafitra ity ianao dia mahazo izany $ 143.88. Raha iray volana monja ianao no mividy azy dia $ 19.99 no vidinao.
Ireo drafitra roa ireo dia miaraka amin'ny antoka fampodiana vola 45 andro.
4. Hide.Me - 10GB Isam-bolana
Hide.me VPN manome anao serivisy ho an'ny Gigabytes 10 isam-bolana miaraka amin'ny drafitra malalaka ahafahanao misafidy mpizara amin'ny toerana toa an'i Etazonia, Kanada, Netherlands, ary Singapore. Tsy misy hazo voatazona miaraka amin'ny kinova maimaimpoana, ary ny fampiharana tsy manana dokam-barotra toa ny trana fisedrana maimaim-poana.
Ny fetra data 10 GB dia tena hetsika lehibe, io no tena omen'ny kinova andrana Free. Zavatra iray nahatonga anay hanisy Hide.me ato amin'ity lisitra ity. Tsy mijanona eo fotsiny izany, miaraka amin'ny kinova maimaim-poana, mahazo encryptions ambony naoty ambony miaramila miaraka amina endrika mivoaka amin'ny IP ianao izay famatsiana goavambe miaraka amina kinova maimaimpoana ihany koa.
Hide.me dia tokony hanolotra endri-javatra tsara mandritra ny fampiasanao maimaimpoana, andao jerena ny sasany amin'ireo lakileny
Mahazo fetra fampiasana 10 GB isam-bolana ianao. Izay ampy handefasana ny atiny famaritana avo sy fampidinana riaka.
Afaka misafidy mpizara amin'ny toerana 5 samihafa eran'izao tontolo izao ianao. (Etazonia, Netherlands, Canada, Singapore)
Fampihenan-tsarimihetsika miaramila amin'ny fifamoivoizana. I.e. Encopezy AES-256. Tena azo antoka.
Izy io koa dia manome fiarovana fiarovana an-tsokosoko IP.
Fampisarahana Tunneling fisarahana, izay tena ilaina tokoa rehefa multitasking.
Raha momba ny fividianana premium dia manolotra drafitra telo i Hide.me.
Drafitra iray volana:vola $ 12.95
Drafitra enim-bolana: vola amin'ny $ 4.99 isam-bolana (tahiry 62%)
Drafitra herintaona:vola $ 3.32 isam-bolana (tahiry 74%)
Ireo drafitra rehetra ireo dia miaraka amin'ny politika famerenam-bola 30 andro.
5. Tunnelbear VPN - Tsara ho an'ny vao manomboka
Raha vaovao amin'ny sehatra VPN ianao, ity no VPN ho anao. Mahafinaritra ny mpampiasa ary manao ny lahasa voalohany. Miaraka amin'ny angon-drakitra 500mb isam-bolana, tsy ny tsara indrindra ampiasaina amin'ny lahasa lehibe kokoa, fa mahomby sy mora foana ny manao ireo asa kely. Tsy mila geek ianao vao hampiasa ny endriny.
Tunnelbear dia mangarahara tokoa amin'ny fiarovana azy ireo ka navoakan'izy ireo ara-bakiteny ny fanaraha-maso momba ny fiarovana izay tanterahina tsy miankina. Azonao atao ny manamarina izany Eto .Mila manamboatra Tunnelbear amin'ny tanana anefa ianao, satria amin'ny Linux irery ihany no ampiasainy.
Ny fisongadinana sasantsasany izay ho azonao amin'ny kinova misy ny tunnelbear dia.
500 MB ny fampiasana data isaky ny volana.
fahalalahana hisafidy mpizara avy amin'ny firenena 23. (UK, Etazonia, Kanada, Alemana, Japon sns)
Tena azo antoka ny fanafenana bitika AES-256.
Mpizara manerantany voatsara (fa hatramin'ny 500MBs fotsiny)
Vonoy ny endri-javatra hiarovana mba hiarovana ny angon-drakitrao raha tsy mandeha ny serivisy VPN.
Tunnelbear dia manolotra drafitra 2 ho an'ny fiakarana premium.
Drafitra tsy voafetra:izay faktiora amin'ny $ 3,33 isam-bolana.
Drafitra ekipa:izay faktiora amin'ny $ 5,75 isam-bolana.
Tunnelbear dia tsy manome antoka azo antoka.
1Q. Tokony hampiasa VPN amin'ny Mac-ko ve aho?
taona:Tokony hampiasa VPN ianao. Nahoana? Satria manampy sosona fanampiny amin'ny fiarovana anao izy io ary manampy anao hijanona tsy ho voaro amin'ny tontolon'ny Internet. Tokony ho azonao antoka fa ny VPN ampiasainao dia malaza sy alaina avy amin'ny tranonkala ofisialy. Raha mandeha VPN mora na modded ianao, dia mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara amin'ny fiainanao manokana.
2Q. Manoro hevitra VPN ve i Apple?
taona:Na dia manana pejy natokana ao amin'ny tranonkalany ho an'ny VPN aza i Apple, dia tsy mivarotra izany na manakana ny mpampiasa azy tsy hampiasa VPN. Azonao vakiana izany Eto .
3Q. Azoko arahana ve raha mampiasa VPN aho?
taona:Tsia, tsy azo arahana ianao raha mifandray amin'ny VPN, saron'ilay serivisy ny adiresy IP anao, ary raha misy manandrana manara-dia anao dia ho hitan'izy ireo ny adiresy IP an'ny VPN fa tsy ny anao.
4Q. Azo antoka ve ny mampiasa VPN rehefa manao banky amin'ny Internet?
taona:Eny, azo antoka ny fampiasana serivisy VPN mandritra ny fanaovana banky amin'ny Internet, manome anao fiarovana fanampiny ianao ary mitazona anao ho voaro amin'ny halatra cyber. Ny VPN tsara dia tsy hitazona ny angon-drakitrao, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny mombamomba anao nangalarina sy amidy ianao.
Ny VPN dia fitaovana tsara hanananao amin'ny fiarovana anao sy ny fiainanao manokana. Ny ankamaroan'ny VPN maimaim-poana dia tsara amin'ny taratasy fotsiny ary tsy mandeha araka ny namboarin'izy ireo raha ny amin'ny fampiasana azo ampiharina, fa ireo VPN ireo izay noresahinay tao amin'ny safidinay dia azo itokisana sy tena izy. Na dia tsy hahazo ny endri-javatra rehetra amin'ireo kinova Free an'ny sasany amin'izy ireo aza ianao, fa na inona na inona serivisy voafetra homen'izy ireo dia ho ara-dalàna izany.
Safidio izay mety aminao ary milamina sy milamina amin'ny Internet.
tranokala sarimihetsika folo maimaim-poana
afaka mahazo amazon prime maimaim-poana ve ireo mpianatra eny amin'ny oniversite
ny fomba hijerena seho an-tserasera
ovay ny rakitra m4a ho mp3 an-tserasera
avadiho ny rohy youtube ho mp3
misoratra anarana amin'ny streaming streaming netflix